रक्सी र गठिया: म पिउन सक्छु यदि म सेलेब्रेक्स वा मेलोक्सिकममा छु? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण समाचार, कल्याण समाचार कम्पनी स्वास्थ्य खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के म पिउन सक्छु यदि म सेलेब्रेक्स वा मेलोक्सिकममा छु?
के म पिउन सक्छु यदि म सेलेब्रेक्स वा मेलोक्सिकममा छु?
दुखाइ, सूजन, र कठोरता - के तपाईं यी सामान्य लक्षणहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ गठिया ? यस अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC), संयुक्त राज्य अमेरिका मा million 54 मिलियन वयस्क गठिया छ।4मा लगभग 1 छ।
यदि तपाईलाई जोर्नीशोथ वा अन्य भड्काउने चिकित्सा अवस्था छ भने, तपाइँको डाक्टरले एक औषधि जस्तो सुझाव दिन सक्छ सेलेब्रेक्स (सेलेक्सोक्सिब) वा मोबिक (मेलोक्सियम) । धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि तपाईंले यी NSAIDs (नॉनस्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) खानुपर्दछ, तर रक्सीको बारेमा के हुन्छ?
के तपाईं मेलोक्स्याम र रक्सीलाई मिसाउन सक्नुहुन्छ? वा सेलेब्रेक्स र रक्सी? ओभर-द-काउन्टर (OTC) आईबुप्रोफेन र रक्सीको बारेमा के हुन्छ? यी औषधिहरू र रक्सीको साथ सम्भव औषधीको अन्तरक्रियामा नजिकबाट हेर्नेछौं।
के तपाइँ मौखिक गठियाको औषधीको साथ रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ?
त्यसो भए, NSAIDs र रक्सी… पहिले, थोरै पृष्ठभूमि — NSAIDs दुबै ओभर-द-काउन्टर र प्रिस्क्रिप्शन फारममा उपलब्ध छन्। ब्रान्ड-नाम ओटीसी एन्टी-इन्फ्लेमेटरीहरू समावेश गर्दछ मोट्रिन र सल्लाह (जसले दुबै आइबुप्रोफेन समावेश गर्दछ), अलेभ (नेप्रोक्सेन), र इकोट्रिन ( एस्पिरिन )।
प्रिस्क्रिप्शन औषधीहरूले अधिक शक्तिशाली खुराकहरू समावेश गर्दछ आइबुप्रोफेन र नेप्रोक्सेन र अन्य पर्चेको औषधि जस्तै सेलेब्रेक्स (सेलेक्सोक्सिब) र मोबिक ( meloxicam ), अरु मध्ये।
मेरो रगतमा ग्लुकोजको स्तर के हुनुपर्छ?
सबै NSAIDs को एक छ कालो बक्स चेतावनी , जुन खाना र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा आवश्यक कडा चेतावनी हो। यो चेतावनी जीआई रक्तस्राव र राज्यको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ: एनएसएआईडीले गम्भीर जठरांत्र प्रतिकूल घटनाहरूको खतरनाक कारण निम्त्याउँछ रक्तस्राव, अल्सर, र पेट वा आन्द्राको छिद्र, जो घातक हुन सक्छ। यी घटनाहरू कुनै पनि समयमा प्रयोगको समयमा र चेतावनी लक्षणहरू बिना हुन सक्दछ। गम्भीर ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल घटनाहरूको लागि वृद्ध बिरामीहरू बढी जोखिममा हुन्छन्। थप विवरणहरू अनुसरण गर्दछन्, चेतावनीसहित कि केहि कारकहरू, रक्सीको प्रयोग सहित, NIAds को साथ GI को ब्लीड हुने खतरा बढ्छ।
के स्वास्थ्य लाभ एप्पल साइडर सिरका छ
सबै NSAIDs को लागी लागू औषधि जानकारी, चाहे उनीहरु प्रिस्क्रिप्शन हो वा ओभर-द-काउन्टर हो, रक्सीको प्रयोग र GI रगत र पेटको अल्सरको बढेको जोखिमको बारेमा यस चेतावनी समावेश गर्दछ।
यो पनि उल्लेखनीय छ कि टाइलनोल (एसिटामिनोफेन), जो सामान्यतया जोर्नीशोथको लागि प्रयोग गरिन्छ, NSAID को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छैन। यद्यपि Tylenol र रक्सी संयोजनमा, कलेजो बिगार्ने परिणाम हुन सक्छ।
के तपाईं सामर्थी जोर्नीशोथको औषधीको साथ रक्सी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
भोल्टारेन (डिक्लोफेनाक) दुबै मौखिक फारम र सामयिक जेल फार्ममा उपलब्ध छ। सामयिक फारम अब उपलब्ध छ काउन्टर माथि साथै नुस्खा द्वारा। औषधिहरूको NSAID परिवारका सदस्यहरूको रूपमा, दुबै सूत्रहरू (मौखिक ट्याब्लेट र सामयिक जेल) ले GI रक्तस्राव र मदिराको बारेमा समान जानकारी समावेश गर्दछ। उही चेतावनी लागू हुन्छ फ्लेक्टर (diclofenac) सामयिक प्याचहरू। यद्यपि ती वस्तुहरू लागू हुन सक्छन्, यी औषधीहरू अझै पनि रक्सीको साथ जोड्नुहुँदैन।
जीआई रक्तस्राव को लक्षण
उल्लेख गरिए अनुसार, GI रगत NSAID को गम्भीर साइड इफेक्ट हो जुन कुनै पनि समयमा हुन सक्छ, तर NSAIDs र रक्सीको संयोजन गर्दा जोखिम बढी हुन्छ। यदि तपाईं निम्न मध्ये कुनै एक अनुभव लक्षण , चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्:
रातो वा गाढा खैरो र color र कफी ग्राउन्ड बनावट द्वारा विशेषता रगत बान्ता
कालो, ट्यारी मल
पेट दुखाई वा ऐंठन
रक्सी र गठिया: यसले सहयोग गर्दछ वा चोट पुर्‍याउँछ?
हामीलाई थाहा छ कि रक्सीले गठियाको लागि प्रयोग गरिएको NSAID को साथ सुरक्षित रूपमा एकत्रित गर्दैन, तर के रक्सीले गठियालाई पनि असर गर्न सक्छ? के रक्सीले संयुक्त सूजन निम्त्याउँछ?
रस सफा आहार:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
3 मिनेट मा उच्च रक्तचाप निको पार्नुहोस्
के विरोधी मतली औषधि गर्भावस्था को लागी सुरक्षित छन्
के हुन्छ यदि म दुई मेलाटोनिन चक्की लिन्छु
के तपाइँ अर्को व्यक्ति बाट निमोनिया समाउन सक्नुहुन्छ?
योजना बी एक कदम यो कसरी काम गर्दछ